नेपाललाई चीनले सोध्यो – मास्क र औषधीसहित मेडिकल टिम पठाऊँ ? – Life Nepali
नेपाललाई चीनले सोध्यो – मास्क र औषधीसहित मेडिकल टिम पठाऊँ ?
काठमाडौं, २०७६ ४ चैत । कोरोना भा’इरस संक्रमणबाट सुरुमै प्रभावित भएको छिमेकी चीनले नेपाललाई को,रोना वि’रुद्ध ल’ड्न आवश्यक, सबै, स,हयोग उ,पलब्ध ग,राउने ब,ताएको छ । चिनियाँ दूतावास,मार्फत चीनले नेपाल, सरकारलाई के-के सहयोग र सहायता, आ’वश्यक पर्छ, भनेर लिस्ट, समेत मागेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय, स्रोतका अनुसार, नेपाल, कोरोना, संक्रमणको, स’म्भावित द’बावमा रहेको, र यसले नेपालको, अर्थतन्त्र तथा जनजीवनमा, प्र’भाव पारेको’ भन्दै’ चीन’ यसबेला’ ने’पाललाई सबैखा’ले सहाय’ता दिन’ तयार रहेको जानकारी ‘गराइएको छ । चीनले केही राष्ट्र’लाई सहायता’ बढाउने’ नीति’ अनुरुप नेपा’लको आ’वश्यकता के हो’ भनेर’ सोधेको हो ।
चीनले नेपाललाई’ पठाएको’ पत्रमा सोधिएको छ– के नेपाल योबेला’ चीनको सहयोग’ र सहायता’ चाहान्छ ? जस्तो कि नेपाललाई उर्जामा’ सहायता चाहि’एको हो ? नेपाललाई’ हामीले मास्क’ र अन्य मेडिकल’ सप्लाइजहरु’ सहितको मेडिकल टिम पठाउनुपर्छ ? हामी जुनसुकै बेला पनि तप्तर छौं । चीनले, नेपालमा को,रोना, भा,इरस सं,क्रमण अन्त्य भएसँगै, नेपाल भ्र,मण, गर्ने पर्यटक, चीनबाटै पहिलो, भ्रमण, गराउन, समेत चाहेको, जनाएको छ । त्यस्तै उसले, चीनले नेपालका, विकास, परियोजनाहरुमा, ति,ब्रता दिइने, समेत बताएको छ ।
चीनसँग, आवश्यक, सहयोगबारे, छलफल, भइरहेको, को,रोना रोग, रो,कथाम तथा, नि,यन्त्रण, उ,च्चस्तरीय समि,तिका संयोजक तथा, उपप्रधानमन्त्री, ईश्वर पोखरेलले, बताए । उनले चीन र भारत दुवैतिरबाट सहयोगको कुरा आ’एको प्रष्ट पार्दै’ नेपाल सबै छिमेकीहरुसँग मिलेर यो म,हामारी विरु,द्ध ल’ड्न स’क्षम र’हेको” बताए । केही ”दिनअघि ”मात्र चिनियाँ विदेशमन्त्री’ वाङ यीले परराष्ट्रमन्त्री ”प्रदीप ज्ञवालीसँग” टेलिफोन गरी” नेपाललाई ‘कोरोना ”संक्रमणबाट जो’गाउन चीनले आव’श्यक जुन’सुकै स’हायता गर्ने बता’एका थिए । नेपालले चीनलाई को’रोना वि’रुद्ध ल’ड्न १ लाख था’म मा’स्क प’ठाएर ऐ’क्यव’द्धता जनाएको थियो ।
Previous शान्ति मिसन अन्तर्गत रहँदा लेबनानमा मृ’त्यु भएका नरबहादुरको अन्तिम वि’दा,ई
Next बिश्वले नेपालबाट पाठ सिक्दै ! कोरोना वि’रुद्ध शतप्रतिशत सफलता पाउने देश नेपाल मात्रै !
दु’खद खबर : म’लेसियामा नेपाली युवतीको नि;र्मम ह-त्या’
सर्वाधिक चर्चामा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपतिले कति पाउँछन तलब र सेवा सुविधा ? थाहा पाएपछि च’कित पर्नुहुनेछ !
सारा बिस्वलाई खुशीको खबर : ओ’झेलमा बाँचेका द’म्पती जसले को’रोनाको भ्या’क्सिन बनाए !
51 mins ago kamal